“Anyị Ahụwo Mesaya Ahụ”!​—Otú Jizọs Si Mezuo Amụma Baịbụl
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Norwegian Nzema Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
“Anyị Ahụwo Mesaya Ahụ”!
Ihe dị ka narị afọ anọ e dechara akwụkwọ ikpeazụ nke Akwụkwọ Nsọ Hibru, amụma ahụ Maịka buru gbasara Mesaya ahụ mezuru, ya bụ, a mụrụ Jizọs na Betlehem. Ihe dị ka afọ iri atọ a mụchara ya, ya bụ, n’afọ 29 Oge Ndị Kraịst, ihe mbụ Daniel buru n’amụma gbasara Mesaya ahụ a na-atụ anya ya mezuru. E mere Jizọs baptizim n’afọ ahụ, Chineke ejiri mmụọ nsọ tee ya mmanụ. Ihe ndị a mere kpọmkwem n’oge e buru n’amụma na Mkpụrụ ahụ, bụ́ Mesaya, ga-abịa.
Jizọs bidoro ozi ya ozugbo ahụ, “na-ekwusa ma na-ezisa ozi ọma alaeze Chineke.” (Luk 8:1) Jizọs dị obiọma, dịrị nwayọọ ma hụ ndị mmadụ n’anya otú ahụ e buru n’amụma na ọ ga-adị. Ihe ọ kụziiri ndị mmadụ baara ha uru, gosikwa na ọ hụrụ ha n’anya. Ọ gwọrọ ndị mmadụ “ụdị ọrịa ọ bụla” ha na-arịa. Ihe niile a o mere gosiri na Chineke nọnyeere ya. (Matiu 4:23) Ndị mmadụ, ma ndị ukwu ma ndị nta, bịakwutere Jizọs. Ha kwuru na ha “ahụwo Mesaya ahụ”!—Jọn 1:41.
Jizọs buru amụma na tupu Alaeze ya amalite ịchị ụwa, a ga-enwe agha, ala ọma jijiji, na ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ. Ọ gwara mmadụ niile ka ha ‘na-eche nche.’—Mak 13:37.
Jizọs zuru okè, o rubekwaara Chineke isi. Ma, o nwere ọtụtụ ndị iro, ha mechakwara gbuo ya. Ọnwụ ya ghọrọ àjà zuru okè nke a ga-eji mee ka anyị nwetaghachi ihe ahụ Adam na Iv tufuru, ya bụ, olileanya ịdị ndụ na paradaịs ruo mgbe ebighị ebi.
Ọnwụ Jizọs na mkpọli Chineke kpọlitere ya n’ọnwụ ụbọchị atọ ọ nwụchara mezuru amụma e buru na Baịbụl. Mgbe a kpọlitechara Jizọs, ọ ghọrọ mmụọ dị ike. Ma tupu ya alaghachi n’eluigwe, ọ pụtara n’ihu ihe karịrị narị mmadụ ise bụ́ ndị na-eso ụzọ ya ma gwa ha ka kwusaara “ndị mba niile” ozi ọma banyere ya na Alaeze ya. (Matiu 28:19) Hà rụrụ ọrụ ahụ nke ọma otú Jizọs gwara ha?
—Ihe a kọrọ n’isiokwu a si na Matiu, Mak, Luk, Jọn, 1 Ndị Kọrịnt.